Uhlobo olukhethekile lweCeramic Metallization Isibhamu e-Alumina China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > Uhlobo olukhethekile lweCeramic Metallization Isibhamu e-Alumina
Sigxila ekwakhiweni kwezinto ezihlukahlukene zokugcizelela izakhi ze-ceramic ezenziwe ngokucacile, njenge-bhisikidi ye-ceramic ensimbi, i-ceramic ring, i-ceramic tube tube, i-substrate ensimbi ene-metal enjenge-ceramic njalonjalo. Ngokuvamile kwenziwa ngama-alumina angu-95% ngokusebenzisa ukucindezela okumile, ukufaka umjovo we-ceramic, noma ukucindezela okushisayo.
Uhlaka lwe-metallization lusetshenziswa emzimbeni wesisekelo se-ceramic kuqala, ngokulandela isisekelo se-ceramic metallizing siyokwelashwa ngokushisa okuphezulu. Khona-ke ungqimba lwe-metallization unamathisele emzimbeni we-ceramic ngokuqinile. Ukuze kusetshenziswe ukuhlanza kwamanzi ekusetshenzisweni kwesibhakabhaka, ukukhethwa kwengubo yomzimba we-ceramic kuyatholakala, ukufakwa kwezinto ezijwayelekile kuyimbumba ye-nickle, ukufakwa kwesiliva, ukufakwa kwegolide, ukufakwa kwe-tin, ukubhebhelwa kwebheyili.
Siyakwazi ukuhlinzeka nge-tube ensimbi ye-ceramic ekhonjiwe ngokucophelela ngezinhlobo ezihlukahlukene zokugaya, i-CNC maching, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.001 ngobude, +/- 0.005 ububanzi obungaphakathi nangaphandle .
Ubukhulu obuyingxenye encane kuya kumakhulu amakhulu-ubukhulu buyatholakala, t min min. ububanzi bungaba yi-1mm, ububanzi obukhulu bufinyelela ku-800mm. I-plating ejwayelekile njengezansi:
1. I- ceramic ejulile + Mo / Mn (iMolybdenum / Manganese) metallization .................................... ......................... 2. Ukwehla okukhulu kwe-ceramic + ye-Ag (Isiliva)
3. I- ceramic ekhanda + Cu (iCopper) ehlabayo ........................................ .................... 4. Ukwehla okunamandla kwe-ceramic + W (Tungsten) ye-metallization + Au (Gold)
5. I- ceramic ephezulu ye- mo / Mn (i-Molybdenum / i-Manganese) ye- metallization + ye-Ni (Nickle)